Mabhiriji muBalıkesir Nyika Yakavakwa | RayHaber
mushaTURKEYDunhu reMarmara10 BalikesirBalıkesir Nyika Kuvakwa Kwakachengeteka Mabhiriji
Balıkesir Nyika Kuvakwa Kwakachengeteka Mabhiriji
01 / 12 / 2019 10 Balikesir, GENERAL, hyperlinks, HIGHWAY, Dunhu reMarmara, TURKEY
balikesir kumaruwa vakaita akachengeteka mabhiriji
Mabhiriji akachengeteka akavakirwa muBalıkesir kumaruwa; Iwo maHungarians-Karamanlar neNusret-Kepsut akayambuka mabhiriji, ayo ari munjodzi huru yekushandisa, akaparadzwa neBalıkesir Metropolitan Municipality uye yakavakwazve senzira yakachengeteka uye yakapetwa kaviri. Nekuda kwemabhiriji akavhurwa traffic, chekufambisa pakati pevavakidzani yakapfupikiswa uye kuchengetedzwa.
Balıkesir Metropolitan Municipality Dhipatimendi reSainzi Nyaya dzinoramba richishanda munzvimbo dzekumaruwa. Yakapera hupenyu hwayo mudunhu repakati redunhu reHungary maHungari rakabatana padunhu rebhiriji inobatanidza nharaunda yeKarlamanlar yakavakidzana uye yakabatana nedunhu reBalikesir Kepsut'a bhiriji inobatanidza nzvimbo yedunhu yakavandudzwa. Mabhiridha, akakosha kwazvo kuvagari vanogara mudunhu iri, akaputswa uye akavakwa zvakare neBalıkesir Metropolitan Municipality uye ikave yakachengeteka uye yakawedzera kushanda.
Bhiriji rinobatanidza migwagwa yeHungarians Quarter neKaramanlar rakakosha zvakanyanya sezvo ichipa chekufambisa kuenda kumisha mizhinji, nepo bhiriji rinobatanidza dunhu reKepsut neBalıkesir nzvimbo kubva kuNusret Quarter kune yakadoma mamiriro ezvinhu
KUSVIRA PAKUTUNGAMIRA Kunotarisirwa
12 mita yakafara 61 metres yakareba yakapetana, iyo yakavakwa nevaHungarians neKaramanlar'ın yekubatanidza bhiriji kumativi ese ebhiriji nevanhu vanofamba netsoka vanogona kushandiswa zvakazaruka kuvhurika. Nekuvhurwa kwebhiriji kuenda kune traffic, iyo yekuHungaryans Neuvakidzani yakave inowanikwa kune misha mizhinji.
Iyo imwe bhavhani yemugwagwa iyo inopa chokufambisa kuenda kuNusret kumaruwa nharaunda uye inopa njodzi huru panguva imwe chete, inzira yakapetwa kaviri nezvikwata zveBalıkesir Metropolitan Municipality Dhipatimendi reSainzi Nyaya; 12 mita yakafara 30 kureba kwemamita yakavhurwa kutakurwa neanofamba netsoka padivi pemativi ese.
Kupedzisa kwekuvakwa kwemabhiriji uye kutakura vanhu kuvanhu vemudunhu iri nguva yechando isati yasvika yakamutsa mufaro mukuru.
3 Monthly 412 Mharapara Mugwagwa muSanlıurfa Mhiri kweNyika
Yekutanga Magetsi da
Nzira Yekuvaka Inoshanda muEkikişehir Nharaunda Yenyika
Cankesen, Mutya Yekufambisa-Sen Balıkesir Province Divan…
Nzira Itsva kubva kuEskişehir City Centre kuenda kune Mharaunda
Mugwagwa Mabasa muBursa Nemaodzanyemba
Procurement ziviso: Balıkesir Çandır Line Km: 260 + 438 eki
3. International Highways, Bridges uye Tunnels…
Nhasi munhoroondo: 21 February 1931 Değirmisaz-Balıkesir line ...
Kuziviswa kweTender: Urongwa hwekutsvedza huchaitwa mukuparadza Yarm
Apaydın akaita tsvakurudzo paBalıkesir Gar
Tender ziviso: Balıkesir Susurluk m'malo…
Safe Bridges kuBalıkesir Nyika
MaHungariya kuKaraman Bridge
Istanbul Earthquake workshop Inotanga Mangwana